Tekinoloti Rank WordPress Plugin Version 2 wepụtara! | Martech Zone
Tekinoloti Rank WordPress Plugin Version 2 wepụtara!
Na-ekpo ọkụ n'ikiri ụkwụ nke Technorati Rank Plugin mbụ, emezigharịrị m ọdịnaya mmepụta iji mee ya CSS chụpụrụ (n'okpuru bụ nseta ihuenyo, ị nwere ike ịmekọrịta ya na nke dị n'akụkụ saịtị m):
Nke a bụ ihe siri ike karịa ịmịpụta ma mmepụta ya dị mma karịa. Nke mbụ, ejiri m ihe m mụtara na-eme ihe Bittbox iji mee bọtịnụ mmepụta ọ bụla na onyonyo a na Onye ihere.
Nzọụkwụ ọzọ bụ iji ụdị iji wuo onye nke eserese eserese ma e wezụga na e nwere n'ezie enweghị map! Ọ mara ezigbo mma, n'ezie. Nwere ike ịtọ ntọala gbacha gbacha agbam ma mepụta nke ọ bụla n'ime 'ọkụ' na-eji ọnọdụ zuru oke na CSS. Ele mmepụta CSS.
Enwekwara m njikọ nke ọhụrụ Technorati WTF peeji nke na adreesị RSS nke saịtị ahụ. Enwere m olileanya na ọ masịrị gị! Echere m na ọ bụ mmelite dị ukwuu site na nke mbụ! Enwere ihe i njikọ aka nri n'okpuru nke na-akwalite ngwa mgbakwunye ahụ.
Technorati nke ugbu a WordPress ngwa mgbakwunye Version 2.0.4
Gịnị bụ Net Nnọpụiche?
Ahịa Email site Ọnụ Ọgụgụ
Mar 10, 2007 na 2: 40 PM
Ọ bụ na bittbox adịghị egwu?
Nwoke, saịtị ahụ bụ ihe na-akpali akpali.
Mar 10, 2007 na 2: 42 PM
O doro anya! Anọ m na-achọ enyemaka onye na-ese ihe ruo oge ụfọdụ. Anaghị m eji ya ezu iji mee ọfụma na ya, yabụ saịtị dịka Bittbox na-echekwa m ọtụtụ oge!
Mar 10, 2007 na 3: 41 PM
Agbalịrị m ịwụnye ihe kachasị ọhụrụ na nke kachasị na-esote ntuziaka gị na “leta” 🙂
mana enwetara m njehie na-esonụ
Njehie na-egbu egbu: Enweghị ike ịmegharị klaasị na-adịghị adị: simplexmlelement na /home/winex4/public_html/wp-content/plugins/technorati-rank/technorati-rank.php na akara 64
aro ọ bụla?
Mar 10, 2007 na 5: 18 PM
Nke ahụ bụ njehie mgbe SimpleXML bidoro, nke bụ akụkụ nke PHP5. Nkesa gị nwere PHP5?
Mar 10, 2007 na 5: 40 PM
nke ahụ ga-akụziri m ka m lelee mbụ .. o doro anya na Lunarpages na-agba ọsọ 4.4.4 nke PHP
Buru n'uche na m ga-enyocha ụdị nke ọzọ ma ọ bụ kpọgidere siri ike wee hụ ma ha kwalite na 5.0
Mar 10, 2007 na 5: 43 PM
Enwere m olileanya na ha ga-eme ya! Mana enwere m olile anya na onye nwe ụlọ gị ga-ebuli. PHP5 na-eweta ezigbo mmelite arụmọrụ ka mma, yana ụfọdụ ngwaọrụ dị mma maka iji API. M na-eji Jumpline, ị ga-ahụ njikọ na ndepụta ndị nkwado m na ibe m. Ekwenyere m na Dotster nwere ezigbo VDS na-akwado ya na nke kachasị ọhụrụ.
Mar 11, 2007 na 1: 16 AM
Ana m enwe otu nsogbu ahụ
Akpọrọ m onye ọbịa m ma ha kwuru na sava m nwere PHP 4 na PHP 5, mana ọ bụrụ na m chọrọ iji faịlụ PHP gbaa ọsọ faịlụ, edemede ahụ ga - enwe ndọtị faịlụ .php5.
So… M gbanwere faịlụ ndọtị ya, ọ na-apụ n'anya site na plugins na wordpress.
Mar 11, 2007 na 10: 10 AM
Chaị - Amaghị m ma ọlị, BittBox. Ka m lelee ihe Samanthon mere iji gbanwee nsụgharị mbụ na PHP4.
Ọ na-eju m anya na ọtụtụ ndị ọbịa nwere ebe ahụ na-enweghị ọhụụ na nke kachasị ukwuu!
Mar 11, 2007 na 7: 08 PM
Aga m ajụ ụdị mbipute a!
Mar 10, 2007 na 4: 15 PM
Awesome ngwa mgbakwunye, magburu onwe ya styling! Daalụ Doug, na nnukwu ọrụ. Amaghịdị m banyere nke mbụ, mana nke a na-aga n'akụkụ m pronto.
Ọ bụ ezigbo ụgwọ ọrụ ịhụ na ndụmọdụ m nke Illustrator nyeere gị aka ịme bọtịnụ gị !!!!!
Mar 10, 2007 na 5: 38 PM
Daalụ, BittBox! Echere m na m nwere ezigbo anya maka ịke, ma ọ dịtụghị mgbe m ga-enweta ya ọtụtụ oge. Inwe ike ibudata ihe nlere gị ma kesaa ha bụ ihe na-eme ka ọdịiche dị. Enwere m ike imezu n'echiche ndị ahụ ugbu a. 🙂
M na-toying na ụfọdụ echiche na m blog isi na ndabere na-esote.
Mar 13, 2007 na 5: 43 AM
Ọfọn, Doug, ọ dị ka ụdị 2 nke ngwa ahụ kpọrọ m asị. Enwere m ozi njehie:
N'agbanyeghị ozi njehie, ọ na-egosikwa ọkwa Technorati m (~ 26.5k: D). Amachaghị m ihe gbasara PHP ịmara ihe kpatara ọ ji ebe akwa otu faịlụ ahụ.
N'ụzọ na-akpali mmasị, na sava anyị, anyị na-eji SuPHP, yabụ ihe niile na-agba ọsọ dị ka anyị (yabụ chmod chọrọ agaghịzi achọ faịlụ ndị edepụtara n'ụwa, yana ederede php agaghị emezu ma ọ bụrụ na ọ dị oke elu, dịka ọmụmaatụ).
All php maka subdomain a na-agba dị ka php5.
Mar 13, 2007 na 7: 21 AM
Have nwere ndekọ wp-content / cache Xial? Echere m na ọ ga-abụ ezi echiche iji otu cache ndekọ ahụ dịka WP-Cache. N'ileghachi anya azụ, ikekwe ọ bụghị ezigbo echiche! Ahịrị ahụ ga-edegara faịlụ nchekwa ahụ.
Mar 14, 2007 na 8: 18 AM
M na-eme, Doug. Anọ m na-agba WP-Cache ruo nwa oge. 🙂
Achọrọ m ịchọ ịmata ihe kpatara na ọ ga-eme mkpesa banyere nke a, ebe ọ bụ na enwere m ndekọ aha dị mkpa, mana m na-eche na ọ bụ ihe ọzọ kpamkpam.
Mar 14, 2007 na 8: 21 AM
Mmasị bit nke Ama ịgbakwunye:
Ọ ka na-eweghachi njehie.
Apr 9, 2007 na 3: 59 AM
Naanị ịchọrọ ịbanye na inwe otu njehie ahụ. Saịtị na-agba php5, ma gosiputa bọtịnụ.
Agbalịrị m ịkọwa ahịrị 121-123, plọg ahụ na-arụkwa ọrụ nke ọma. Enwere m ike itinye ya ndụ, ka enweghị eriri ndị ahụ ga - akpata nsogbu n'ikpeazụ?
Mar 22, 2007 na 9: 19 AM
Ana m enweta otu njehie dị ka nke dị n'elu, echekwara m na ọ bụ cache dir mana enwere m otu ma hụkwa na ikike ide ederede ziri ezi.
Na mmanya n'akụkụ ọ ga-egosi ngwa mgbakwunye (na ọkwa) mana ya na njehie ndị ahụ dị n'elu ya.
Mar 22, 2007 na 9: 41 AM
Nwere ike ịlele ịhụ na ị nwere 5 ụdị PHP na CURL agbanyere? Nwere ike ime nke a site na iwuli ibe na saịtị gị <?php phpinfo(); ?> na peeji. Mepee ibe ahu. N'elu peeji a nwere mbipute gị nke PHP ma ị nwere ike ịchọ CURL iji hụ na agbanyere ya.
Mar 23, 2007 na 5: 30 AM
Ọfọn, Doug, enyochare m ụdị mbipute PHP m ugboro abụọ.
M na-agba ọsọ na PHP5, a na-achịkọta cURL na (otu n'ime arịrịọ atọ m na-arịọkarị onye ọbịa m, ka a chịkọta ihe n'ime PHP).
Ihe ọ bụla ọzọ na-arụ ọrụ nke ọma, mana amachaghị m ihe kpatara ngwa mgbakwunye a ji akụ, belụsọ na ọ bụ ụdị cURL a chịkọtara na PHP (Anyị nọ na 7.15.4, nke kachasị ọhụrụ pụtara 7.16.1). Agbanyeghị, achọghị m ịta onye na-elekọta m ka ọ chịkọta php5 ọzọ maka nke ahụ, ọ bụrụ na m nwere ike inyere ya aka. <: 3
Mar 23, 2007 na 6: 46 AM
Aga m elerukwu anya n’ime izu ụka a. Ọ na-agba ọsọ na enweghị nsogbu na saịtị ole na ole - yabụ ọ bụ otu n’ime ihe atọ: 3. Cache, 1. cURL or 2. Pdị PHP.
Enwere m ike iji ọrụ PHP 4 mebere okenye dọpụta ma kọwaa XML mana ọ nwere ike belata ya ntakịrị - aga m anwale izu ụka a. Enwere m ekele maka ntinye niile. "Houston, anyị nwere nsogbu!".
Apr 1, 2007 na 1: 25 PM
Naanị ihe ị ga-eme: Technorati amalitela Njikwa Ngwunye.
Ọzọkwa - maka ndị niile nwere nsogbu na ngwa mgbakwunye a, aga m agba gị ume ịkwaga na ụlọ ọhụụ :). M nwetara a 12 ọnwa free pụrụ iche na m usu na ala nke m Banyere page.
Apr 5, 2007 na 3: 06 PM
Nnukwu ọrụ na ngwa mgbakwunye. Ọ na-arụ ọrụ 'site na igbe' na Jumpline ma tinye ya na blọọgụ m ugbu a.
Apr 22, 2007 na 12: 16 PM
M natara nnọọ ole na ole na-arịọ na e nwere ndị e dere ede ma ọ bụ na-agụ site na cache faịlụ. M n'ezie mata esemokwu ebe m na-pushing na Anam Udeme cache faịlụ ka mgbọrọgwụ ndekọ. M gbanwetụrụ mbipute 2.0.4 nke mere na ọ na-ede a cache subdirectory n'ime ngwa mgbakwunye na ndekọ na.
Biko mee ka m mara ka o si agba ọsọ! (Ka dị mfe SimpleXML na cURL!)